စပွန်ဆာမရလို. စ်ိတ်ညစ်တယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » စပွန်ဆာမရလို. စ်ိတ်ညစ်တယ်
Posted by ရွှေဘိုသား on Aug 23, 2011 in Think Different | 19 comments
ကျနော်အခုရေးတဲ.ပို.စ်တွေလိုမျိုး မတင်ချင်ပါဘူး ကိုယ်.မြန်မာမိန်းကလေးတွေလည်း တစ်ချို.တလေ အဲလိုရှိတယ်ဆိုတာကို မြန်မာစာတတ်တဲ.ဘယ်လူမျိုးမှ မသိစေချင်ပါဘူး
ဒါပေမဲ.လည်း မျက်စိရှည်. တင်မြင်နေကြားနေရတော.လည်း မနေနိုင်ပဲရေးရပြန်ပါပြီ
မိန်းကလေးတစ်ချို.ကြား အထူးသဖြင်. တက်သစ်စ မော်ဒယ်မလေး တစ်ချို.ရဲ. အောင်မြင်ဖို.အတွက် ဖြတ်လမ်းကနေလိုက်နေတဲ. စပွန်ဆာ ကိစ္စပါပဲ တစ်ခါ မမအိတုန် ရေးသလို
ပါပဲ စပွန်ဆာရှာတာ ပိုင်းလုံး လုပ်တာလွယ်တာမှတ်လို. ကျနော်တို. အလုပ်က ၀န်ထမ်းကောင်မလေးတစ်ယောက်က မော်ဒယ်အသစ်လေးတစ်ယောက်နဲ.
တော်တော်ရင်းနှီးပါတယ် ကျောင်းနေဘက်တွေဖြစ်တော. အခုလည်း အလုပ်ကိုခဏခဏလာပြီး ခေါ်ပြောနေတာပေါ. ကျနော်တို.အလုပ်က အင်တာနက် ကဖေးမှာပါ
ညဘက်ဆို ကျနော်တို. အင်တာနက်ဆိုင်ကို အမြဲလာထိုင်ပြီး ချက်တင်ရိုက်ပါတယ် အကောင်းတော.မဟုတ်ဘူးနော် စပွန်ဆာ ရှာချင်လို. သုံးနေတာ ရွာသားတွေလည်း
သတိထားအုံး အဲလိုကောင်မလေးတွေနဲ. တွေ.နေအုံးမယ် အဲဒါကလည်း သူကိုယ်တိုင်ပြောတာနော် ကျနော်တို.နဲ.ကျတော. ယောင်္ကျားလေးနဲ.မိန်းကလေး ဆိုတော. သိပ်မရင်နှီးပါဘူး မျက်မှန်းတန်းမိရုံပေါ. သူ.ကျောင်နေဘက်သူငယ်ချင်းနဲ.တွေ.ရင်တော. ပွင်.ပွင်.လင်းလင်းပဲ ဆိုင်လာလို. ကျနော်တို.ဆိုင်ကကောင်မလေးက ခရီးဦး
နှုတ်ဆက်တာတောင် ဟဲ.နင်.စပွန်ဆာ ကမရသေးဘူးလားတဲ. ကောင်းရော ပထမတော. နောက်ပြောင်ပြောနေတယ်ထင်တာ မော်ဒယ်မလေးကိုယ်တိုင် ကျနော်.ရှေ.တင်
သူဘာ.လို.စပွန်ဆာ လိုအပ်တာ ဆိုတာကို သူ.သူငယ်ချင်းကို မရှက်တန်းပြောပြတော.မှ တော်တော်ကိုအံ.သြခဲ.ရတယ်ဗျာ
ဟဲ.ကောင်မရယ် ငါ.မှာလေ သင်တန်းသွားဖို. တစ်ခါတစ်လေ ရှုတင်သွားဖို. ကိုမိတ်ကပ်ဖိုး အ၀တ်စားဖိုးကလည်း မခံနိုင်တော.ဘူး ငါလည်းအခု စပွန်ဆာရှာနေတာ
မရဘူး အပြင်လည်းမရသေး အွန်လိုင်းမှာလည်း မရသေးနဲ.စိတ်ညစ်ပါတယ် အွန်လိုင်းကလည်း ရှာလို.သာရှာရတာပါ သိပ်မစွန်နိုင်ပါဘူး အင်တာနက်သုံးမှတော. လူငယ်တွေ
ကများမှာလေ လူငယ်တွေဆိုရင် သိပ်အဆင်မပြေဘူး သူတို.ကတောင်ပြန်ပြီး ချူကြအုံးမှာ ငါ.ကချူလို.ရမဲ. အဖိုးကြီးတွေပဲ ငါကလိုချင်တာဟ တကယ်ကြတော.လည်း
ဒီမော်ဒယ်ကို လုပ်ချင်လို.သာလုပ်ရတာ တကယ်တန်းကျတော. ပိုက်ဆံကမလိုက်နိုင်ဘူးဟာတဲ.
အဆင်မပြေလို. ညဉ်းနေတာပါ သူများတွေက စီးပွာရေးအဆင်မပြေလို.ညဉ်းတာ သူကစပွန်ဆာရှာမတွေ.သေးလို. ညဉ်းတာ နည်းနည်းတော.ထူးဆန်းသလိုပဲ
ပြောချင်တာက မိန်းကလေးငယ်တစ်ချို. ဘာ.လို.အခုလို ဘ၀ကိုဖြတ်လမ်းကနေ လိုက်ချင်ကြတာလည်း ကိုယ်တကယ်ကောင်းရင် သူ.ဟာသူ တန်ဖိုးတစ်ခုရလာမှာပါပဲ
သူတို.ကတော. မော်ဒယ်လုပ်ရတာကလည်း အချင်းချင်းပြိုင်ကြတာက များလို.လို.တော.ပြောကြတာပဲ စပွန်ဆာတောင် အပြိုင်ရှာကြတာတဲ.ဗျာ
ငါ.ဘဲကြီးက ရေလျှံတယ် သူ.ဘဲကြီးမှရေလျှံတယ်နဲ. အချင်းချင်းလည်း စကြနောက်ကြနဲ. တစ်ခါတစ်လေကြားမိပါသေးတယ်
မနှစ်တုန်းက ရွှေမန်းမြို.က မော်ဒယ်တစ်ယောက်ကလည်း အင်တာဗျူးမှာ ဖြေထားတာတွေ တွေ.မိပါသေးတယ် စာနယ်ဇင်း သမား တော်တော်များများရဲ. ဝေဖန်ချင်းတောင်
ခံလိုက်ရပါသေးတယ် ဝေဖန်လည်းဝေဖန်ထိုက်ပါတယ် သူအင်တာဗျူးဖြေထားတာကလည်း ဟန်းဆက် ဆိုလည်းအမျိုးမျိုးပြောင်းကိုင်တဲ.အကြောင်း ရှောပင် ဆိုလည်း
စင်္ကာပူထွက်ဝယ်တဲ.အကြောင်း ကားကလည်း သိန်းဘယ်လောက်တန်တယ်ဆိုတာတွေကို အားရပါးရဖြေထားတာပါ အခုမှတက်ခါစ မော်ဒယ်လေးတစ်ယောက်က
နံမည်ကြီး မင်းသမီးမော်ဒယ် တွေတောင်မသုံးနိုင်တဲ. ပမာဏတွေ သုံးတယ်ဆိုတာ လူသိရှင်ကြား ကြွားတော. ၀ိုင်းပြောကြတာခံရပြိပေါ.
ဟုတ်လည်းဟုတ်တာပဲ သူကဘယ်လောက်တောင် ၀င်ငွေကောင်းနေလို.လည်း အဲလောက်ကြီးသုံးနိုင်တာလည်း မိဘပိုက်ဆံလို.တော. မထင်နဲ.နော် သူကိုယ်တိုင်ကိုက
သူ.အနုပညာကြေးနဲ. ရတာလို.ပြောထားသေးတယ် ကျနော်တို. ဘော်ဒါတွေပြောပြောနေတဲ. စကားပုံလေးကို တစ်ခုထပ်တိုးထားတာလေး ဖောက်သည်ချလိုက်အုံးမယ်
ဘယ်လိုမှ မတင်.တယ်ဘူးတဲ.ဗျာ ဟုတ်လည်းဟုတ်ပါတယ် အခုခေတ်ကျတော. စာဆိုတစ်ကြောင်းတိုးလာပါတယ်
ဘ၀ကို ဒီလိုအလွယ်မလိုက်ပါနဲ.လို. အဲလိုလုပ်နေကြတဲ. မိန်းကလေးငယ်တစ်ချို.ကို ပြောချင်ပါတယ် ကျနော်တို. ယောင်္ကျားတွေ ဆိုတာကလည်း အပေးအယူပဲ
လုပ်ကြတာပါ ဘယ်သူမှ ဝေဿန္တရာ မင်းမလုပ်ကြပါဘူး ဘယ်ကျားမှလည်း ဥပုဒ်မစောင်.ကြပါဘူး အယူရှိမှ ပေးတာပါ လို.အဲလို ဘဲအိုတွေဆိုပြီး ခဏတဖြူတ် စပွန်ဆာရှာ
ချင်တဲ.မိန်းကလေး တစ်ချို.ကို ကျနော်ထင်တာနဲ. ပြောချင်ပါတယ် ယောက်ျားတိုင်းက မိန်းကလေး ငယ်လေးတွေ အကပ်ခံပြီ ဆိုကတည်းက ပါးနပ်ကြပါတယ်
သိပ်လည်းအထင်မသေးကြပါနဲ. မြူဆွယ်လို.ရချင်ရပါလိမ်.မယ် ဒါပေမဲ.လည်း သူတို.ဆီကရတဲ. ထောက်ပံ.ကြေးနဲ. မတန်အောင် ပြန်ပေးလိုက်ရတဲ. ကိုယ်.ရဲ.
ရခဲလှတဲ. ဘ၀လေးကိုလည်း တန်ဖိုးထားကြပါလို.ပြောချင်ပါတယ် တစ်ခါက စာစောင်တစ်ခုထဲမှာ ဖတ်လိုက်ရပါသေးတယ် KTV ကကောင်မလေးက ဘဲကြီးကို
မြူဆွယ်ပြီး ဖုန်းတောင်း ဘဲကြီးကပေးလိုက်တယ် အိမ်ပါဝယ်ခိုင်းတော. ဘဲကြီးက သူငယ်ချင်းတွေနဲ. တိုင်ပင်ပြီး နောက်နေ.ကျတော.ထပ်သွား
ကောင်မလေးက အိမ်ဝယ်ခိုင်းတော. တီလုံးတိုက်ထားတဲ.အတိုင်း သူ.သူငယ်ချင်းဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး သူ.ရဲ.မန်နေဂျာ သဘောမျိုးဖုန်းထဲကနေ လှမ်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်
ငါနဲ. ငါ.အငယ်လေးနေဖို. တိုက်ခန်းတစ်လုံး အမြန်ဆုံးစုံစမ်းဝယ်ပြီး ဖုန်းပြန်ဆက်ပါပေါ. ဖုန်းကလည်း သပ်မကြာခင်ပဲ ပြန်လာပါတယ် တိုက်ခန်းရပါပြီဆရာပေါ.
ကောင်မလေးကလည်း အပိုင်ဆိုပြီး အဆင်.ကျော်ပါတော.တယ် ကိုကို အိမ်ကအဖွားကြီးကို ကွာရှင်းလိုက်တော.နော် မီးနဲ.နေရအောင်ပေါ.
နောက်နေ.ကျတော. ဘဲကြီးကလည်းမီးနဲ. တိုက်ခန်းမှာတူတူသွားနေပြီး နောက်တစ်ရက်ကြတော. သူ.သူငယ်ချင်းတွေနဲ. တီးလုံးတိုက်ထားတဲ.အတိုင်းချိန်းလိုက်ပြီး
ရပ်ကွက်ထဲက အာကြမ်းကြမ်း မိန်းမကြီးတစ်ယောက်ကိုပိုက်ဆံပေးပြီး မယားကြီးနေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ခိုင်းလိုက်ပြိးတော. အငယ်လေးရှိတဲ.တိုက်ခန်းပေါ်တက်ပြီး
လင်ခိုးမ ပိုင်းလုံးမ ဘာညာပြော ပါးတွေနားတွေရိုက်ပေါ. ကောင်မလေးခဗျာ ရှက်လွန်းလို.ထွက်ပြေးတာ သူ.ပါလာတဲ. အ၀တ်စားတွေတောင် ယူမသွားနိုင်ဘူးဆိုလား
ဖတ်လိုက်ရလို. အဲလိုကျားတွေနဲ.တွေ.မှ မရင်းတုတ် အရင်မြှုပ်မှာ စိုးလို.စေတနာနဲ. အစကတည်းက မရှာကြတာ ကောင်မယ်လို.ထင်ပါတယ်
ကျနော်ရေးတဲ. ပို.စ်က မိန်းကလေးတိုင်းကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး စပွန်ဒယ် တွေကိုသာပြောလိုချင်းဖြစ်
ပါတယ် တစ်ချို.လည်း အဲဒါကိုပဲ အလုပ်လိုသဘောထားလုပ်တဲ. သူတွေလည်းတွေ.ဖူးပါတယ် ဘ၀ကို လွယ်လွယ်မလိုက်ကြဖို.ပဲပြောချင်ပါတယ်
ဒီဘက်ခေတ်ကြီးကလည်း ကျနော်တို. ယောက်ျားလေးတွေတောင် အပြိုင်အဆိုင်ဝတ်ချင်ကြတာ မိန်းကလေးတွေ အဲလိုဖြစ်ကြတာလည်း သိပ်တော.မဆန်းတော.ပါဘူး
ကျနော်တို. ကျားပိုင်းလုံးတွေလည်း ရှိပါတယ် ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် မကောင်းပါဘူးလို.ပြောချင်ပါတယ် ကိုယ်.အားကိုယ်ကိုးပါ ကိုယ်သာလျှင်ပဲ.ကိုင် ရှင်ဖြစ်ပါတယ်လို.
ပြောချင်ပါတယ် သိပ်တော.လည်း မရေးတတ်ဘူးဗျာ မျက်မြင်တွေ.ခဲ.တာလေးနဲ. ထင်တာလေးကိုရောရေးလိုက်တာ
ကောင်းပါတယ်…တချို့လဲ သိထားသင့်တာပေါ့… အော်..စပွန်ဆာ…စပွန်ဆာ….တဲ့…
မရှိလို့ မှ ရှာပါတယ် ဆိုမှတော့
အာလကေ များများ သာ ရှာထားပေတော့
မောင်ရင့် ပုံ က
သနားကြင်နာ စာနာ တတ်မယ့် ပုံပါပဲ
လိုချင်နေသူ လေးတွေ ကို ပေးကမ်းရတာ မင်္ဂလာ တစ်ပါး ပဲ ပေမလား
အမလေး ရွှေဘိုသားတို့ များ မရေးတတ်လို့ တော်ပါသေးတယ်။မော်ဒယ် ဘဝ ကတော့ ဝက်ဝက်ကိုကွဲပါလေရောနော်။ဒီစာသားကတော့ လန်းတယ်နော်—-
အော် မော်ဒယ်ရွှေစင်တစ်ယောက် ဆေးရုံကရောဆင်းပီတဲ့လား။သူပေါ့ သိန်း ၃၅၀တန် ဟန်းဆက်ကို တပြပြနဲ့ ကြွားလုံးထုတ်သွားတာ။သူမို့ မရှက်ပါတယ်နော်. အနုပညာချွေးနဲ စာလေးပါတဲ့ဟွန့် ဟုတ်မှာပါ. မောင်မောင်တေဇ ချီးမြှင့်တဲ့ စပွန်ဆာခနေမှာပါရှင် —ကောင်းကြသေးတာပေါ့
ကိုယ်ဘယ်ခရီးသွားလို့ ဘယ်လိုင်းက ဘာကားစီးမလဲဆိုတာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်
စပွန်ဆာက ခုမှမဟုတ်ဘူး ခေတ်အဆက်ဆက်ကရှိနေတာ၊ သူ့ခေတ်နဲ့တော့သူတွင်ကျယ်ဆိုသလိုပေါ့၊ တိုးတက်လာတဲ့ခေတ်မှာ ဆုတ်ယုတ်တာတွေလဲ ကြုံတွေ့ရတော့မှာ၊ မြန်မာနိုင်ငံတင်မဟုတ်ဘူး စင်္ကာပူလိုနိုင်ငံမှာတောင်ရှိတယ်၊ခုခေတ်လူတွေက ပါတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်ရကောင်းမှန်းရယ်မသိတော့ဘူး၊ ဒါဟာ ဂုဏ်ယူစရာ တစ်ခုအလား တချို့ တွေဆို ပြိုင်ဆိုင်ပြီး ဂုဏ်ယူနေတာတောင်ရှိတယ်။ (ကျနော်တို့မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု၊ ပါတ်ဝန်းကျင်နဲ့နိုင်ငံအနေအထားက တိုင်းပြည်ကျယ်ပေမဲ့ Information ကအရမ်းရလွယ်တယ်၊ ဥပမာဗျာ ကျနော်မဟုတ်တာလုပ်ဖို့အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတော်တော်ရှောင်ရမယ်၊ မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းကို မသိအောင်လှုပ်ရှားရမယ်၊ မျက်နှာပြောင်တိုက်ရဲတဲ့သူတွေကိုတော့ မပြောလိုပါဘူး၊)
ခေတ်ကြီးကဘဲပြောင်းလဲလာတာလား၊ လူတွေရဲ့ ဟီရိသြတပ တရားတွေ လျော့နည်းလာတာလား?????
လူပျိုလူလွတ်ယူလိုက်ရင် ဒီလိုရွှေငွေတွဲလွဲနေရဖို့ မသေချာဘူးတဲ့
ပတ်ဝန်းကျင်ကဘာပြောပြော..ကိုယ်တကယ်ငတ်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်က ထမင်းကျွေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပဲ
အော်ဒုက္ခ ဒုက္ခ စပွန်ဆာ ခေတ်ပါလားနော်..
ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကိုယ်ကိုတော့ စိတ်ချပါတယ်.. စပွန်ဆာ ရှာခံရမယ့် ၀င်ငွေမျိုး မရှိတဲ့သူဆိုတော့လေ…
ဒါမျိုးတွေကြောင့် မြန်မာ့ ရုပ်ရှင်၊မော်ဒယ် လောက မတိုးတက်တာ… ဘယ်နှယ်ဗျာ နိုင်ငံတကာက သရုပ်ဆောင်တွေ သရုပ်ဆောင်ကကောင်းဖို. အပီအပြင်ကြိုးစား နေကြတဲ့အချိန်မှာ ဒီက စပွန်ဆာ ရှာနေတယ်.. ကောင်းရော..
အမြင်မတော်လို. ရေးမိတာဆိုတာ ၀န္တာမိ
စပွန်ဆာ ရှာကြတာကလည်း ခုခေတ်မှမဟုတ်တော့ပဲ ခေတ်အဆက်ဆက် ရှာလာကြတာ…. ဘာတဲ့ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်ကိုတောင် တော်တော်များများ ခေါ်ကြပါသေးတယ်… စက္ကန်းမြို့တော်ဆိုလားပဲ။ လောကမှ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင် သမာအာဇီဝနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီး စားရတာက လိပ်ပြာသန့်ပါသေးတယ်။
ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်ကိုတောင် တော်တော်များများ ခေါ်ကြပါသေးတယ်… စက္ကန်းမြို့တော်ဆိုလားပဲ။
နောက်တမျိုးမျိုး လှလှလေး ခေါ်ထားတာရှိတယ် “အငယ်လေးတို့ရွာ” တဲ့
စပွန်ဆာ စပွန်ဆာ နေရာတိုင်းလိုလိုမှာ ဒီစကားက ကြားနေရတာပါလား
စပွန်ဆာမ၇ှိတဲ့ မော်ဒယ်လ်တွေရဲ့ ဘဝက တော်တော်ဆိုးတယ်ဆိုပဲ
သူတို့ အချင်းချင်းတွေ့လို့ စပွန်ဆာ မရှိဘူးပြောရင် တော်တော် အောက်ကျနောက်ကျနိုင်တယ်ဆိုပဲ
ယောကျာင်္းလေး မော်ဒယ်လ်တွေမှာလည်း ၇ှိပါသေးတယ်တဲ့ ….
အင်း သိတယ်သိတယ် မနွယ်ပင်ရေ
သူတို့ကတော့ အခြောက်တွေတောင် ပါသေးဆိုပဲ
စပွန်ဆာရှာတယ်ဆိုတာ မော်ဒယ်လောကမှာတင်မဟုတ်ပဲ … လက်ရှိအပြင်လောကမှာပါ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ … ပေါ်ပြူလာဖြစ်ရပ်မျိုးပေ့ါ … ။ မော်ဒယ်မှ စပွန်ဆာလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးနော် … အပြင်ကကောင်မလေးတွေလည်း … လိုချင်ကြတယ်… ။ လိုချင်ကြမှာပေါ့ … ပင်ပင်ပန်းပန်း လုံ့လသုံးစရာမလိုပဲ ရတဲ့ ပိုက်ဆံကိုး ။ စပွန်ဆာထားတယ်ဆိုတာ အချောင်သမားတွေရဲ့ .. စိတ်ဓါတ်ပါပဲ .. ။ လူမသိသူမသိ ပြန်ပေးလိုက်ရပေမဲ့ … မိမိကိုယ်စောင့်နတ်တော့ သိတယ်မို့လား ။
အရာဝတ္တုတွေကို မိမိကိုယ်နဲ့ ရင်းပြီးမှ ရလာတာ … အဲ့ဒီအရာဝတ္တုတန်ဖိုးလောက် မိမိကိုယ်က အဖိုးမဲ့သွားပြီလား မတွေးမိကြဘူး … ။ ပေးတဲ့လူနဲ့ ယူတဲ့လူနဲ့ အပေးယူ ဘယ်လောက်ပဲ မျှတမျှတ .. စပွန်ဆာလို့ ကြားတာနဲ့ … နားရင်းအုပ်ချင်နေမိတာ ဘာစိတ်လည်းတော့မသိဘူး ။
မော်ဒယ်ဆိုတဲ့ ဟာတွေကိုလည်း ပြောချင်တယ် … -င်မနိုင်ပဲ ပဲကြီးဟင်းတော့ မစားကြနဲ့ပေါ့ .. ။ မိဘက မတတ်နိုင်လျှင် ကိုယ်နဲ့သင့်လျှော်ရာ အလုပ်လေးလုပ်ပြီး သမ္မာသမတ်နေကြပါလား … မတန်မရာ လူသိရှင်ကြား နာမည်ကြီးချင်သေးတယ် …
မြန်မာမော်ဒယ်မလေးအားလုံးနီးပါ စပွန်ဆာရှိကြပါတယ်။ မရှိတဲ့လူကတော့ ခပ်ရှားရှားရယ်ပါ။
စပွန်ဆာပေးတဲ့လူက မော်ဒယ်မလေးဆီက ခန္ဒာကိုယ်ကို ရပါမယ်။ မော်ဒယ်မလေးတွေက ကား၊ဖုန်း၊အိမ်၊ ငွေ၊လက်ဝတ်ရတနာ၊ နိုင်ငံခြားအပန်းဖြေခရီး စတာတွေရပါမယ်။
ဒီတော့ ပုံစံတွေက အကြီးစားဖာတွေလို့ပဲသတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။
မော်ဒယ်လောကတင်မဟုတ်ပါဘူး။ အပြင်လောကမှာလည်းရှိနေတတ်ပါတယ်။ အခုကြားရတာက ခေတ်မီလာတယ်လို့ပဲဆိုရမလားပဲ။ စပွန်ဆာကိုကိုများပဲ ဥာဏ်များလာတယ်ဆိုမလားပဲ စာချုပ်နဲ့ဆိုလား လုပ်လာကြပါတယ်။ သတ်မှတ်တဲ့ကာလအတွင်း တစ်နှစ်ဆိုတစ်နှစ် နေထိုင်မှ အဆိုပါအိမ်တို့ကားတို့ ငွေတို့ ကိုပေးပါမယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်မျိုးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အချို့မိန်းမလေးတွေက သူတို့ရချင်တာရပြီးရင် ဖယ်ခွာသွားတတ်လို့ပါ။
ကြည်ဖြူသျှင်ပြောပြတဲ့ ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့ စပွန်ဆာအဓိပ္ပာယ်
ခေတ်ရေစီးကြောင်း ဘယ်လောက်တိုးတက်တိုးတက်၊ ဘယ်လိုပြောင်းလဲပြောင်းလဲ အပျိုစင်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို စောင့်ထိန်းသင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီခေတ်မှာ စပွန်ဆာဆိုတဲ့စကားကို အရမ်းသုံးကြတယ်။ ဟိုလူ့ကြည့်လည်း စပွန်ဆာ၊ ဒီလူ့ကြည့်လည်း စပွန်ဆာနဲ့ ပြောဆိုနေကြတယ်။ ဒါဟာ ဂုဏ်ယူစရာမဟုတ်ပါဘူး။ အရမ်းရှက်စရာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာကောင်းကောင်းနဲ့ပဲ အလုပ်လုပ်ကြစေချင်ပါတယ်။ အခုခေတ်မှာ Brand တွေ အရမ်းသုံးကြတယ်။ Brand သုံးမှ လူရာဝင်တယ်ထင်ကြတယ်။ ဟန်းဖုန်းကိုင်တာကအစ အိုင်ဖုန်းမှ ကိုင်ချင်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလှတရားဆိုတာ Brand တွေ သုံးမှမဟုတ်ပါဘူး။
အဓိကက တော့ ကိုယ့်ရဲ့သိက္ခာ Brand ကို တည်ဆောက်ကြပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ နာမည် Brand ကိုတည်ဆောက်ကြပါ။ ကိုယ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ အဝတ်အစား Brand က အရေးမကြီးပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ Brand က အရေးကြီးပါတယ်။ အစ်မကိုယ်တိုင်လည်း Brand မသုံးပါဘူး။ Brand ကြီးဝတ်ရမှာကိုလည်း အရမ်းနှမြောပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ပေါ်မှာ ဝတ်လိုက်လို့ ဒီအဝတ်အစားနဲ့ ကိုယ်နဲ့လှတယ်၊ တင့်တယ်တယ်ဆိုရင် ကျေနပ်တယ်။ ဟန်းဖုန်းဆိုလည်း အိုင်ဖုန်း မသုံးဘူး။ အစ်မအတွက် လိုအပ်တဲ့ဖုန်းကိုပဲသုံးတယ်။ အိုင်ဖုန်းသုံးသင့်လို့သုံးတာ တစ်မျိုးပေါ့။ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ ကြွားဝါဖို့အတွက် ဂုဏ်တစ်ခုအဖြစ်တော့ မလုပ်စေချင်ပါဘူး။ တတ်နိုင်လို့သုံးတာသုံးပါ။ မတတ်နိုင်ဘဲနဲ့ လူအထင်ကြီးအောင်သုံးချင်တော့ ငွေလိုတဲ့အခါ စပွန်ဆာဆိုတဲ့ စကားလုံးမျိုးတွေ သုံးလာရတယ်။ အဲဒါကြီးကို တော်တော်မကြိုက်ဘူး။
တကယ်တမ်းကျတော့ စပွန်ဆာဆိုတဲ့ စကားလုံးက အရမ်းကောင်းတဲ့ စကားလုံးပါ။ အဘိဓာန်ထဲမှာ ကြည့်ကြည့်ရင် “မရှိတဲ့သူတွေအတွက် ပံ့ပိုးပေးတာ”လို့ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာဆိုရင်လည်း ထောက်ပံ့ပေးတဲ့သဘောပေါ့။ ရှိုးပွဲတစ်ပွဲကို စပွန်ဆာပေးတယ်ဆိုတာ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့သဘော။ ကူညီပေးတဲ့သဘော။ လူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်သိက္ခာကို ရောင်းစားလိုက်ပြီးမှ ရတဲ့စပွန်ဆာကြီးကတော့ မကောင်းပါဘူး။ ဒီကဏ္ဍလေးကနေ အစ်မ မိန်းကလေးတွေကို ပြောချင်တာက မိန်းကလေးတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းစေချင်တယ်။ ငွေနောက်မလိုက်စေချင်ပါဘူး။ နောက်ဆုံး ကိုယ့်မှာငွေမရှိတောင် အပျိုစင်ဆိုတဲ့ တန်ဖိုးလေးရှိစေချင်တယ်။ ဒါ မိန်းကလေးတိုင်းကို အစ်မပြောချင်တဲ့စကားပါ။
Credit: အေးသူစံ (7Day News Journal)
အခု Post နဲ့တိုက်ဆိုင်လို့ ကူးပြီး Comment ပေးလိုက်တာပါ။
It may be gossip but how will you say this ?
One of the public bank chairman boughtahouse for the lady celebrity ,singer , mother of one child at 650,000,000/- at Parami Housing , Yangon . The news spread and now , his wife call for the divorce.
ငယ်ကတည်းက အုပ်ချုပ်တဲ့မိဘများက ..ဘာသာရေးအကြောင်း ပြောပြထားရင်.
အခြေခံငါးပါးသီလ အဓိကပေါ့..အဲဒါတွေပြောပြထားရင်.. အဲလိုပစ်စလက်ခတ်ဖြစ်မလား..
သားသမီးမကောင်းမိဘခေါင်းလေ.. ဒယ်အိုးမှ မကြောက်ကြတော့လည်း .. ခိုးပေါ့.. သူများလင်ကို..
အဲ အဘိုးကြီးတွေကလည်း.. အဲမော်ဒယ်တွေက .. အလွတ်တွေမို့လို့.. ကာမေသုမိစ္ဆာကံ မထိုက်ဘူးများ ထင်နေလားမသိ.. သူလည်းဒယ်အိုး..ကိုယ်လည်းဒယ်အိုး ..